Mgbasa Ozi Mgbasa Ọ Na-arụ Ọrụ? | Martech Zone
Mgbasa Ozi Mgbasa Ọ Na-arụ Ọrụ?
Sunday, Jenụwarị 6, 2013 Douglas Karr
Ahịa mgbasa ozi ọ na-arụ ọrụ? Lab42 jụrụ ya nke ahụ ma tinye akwụkwọ ozi a na nsonaazụ ya.
Anyị kpebiri ilele etu ndị ahịa si ele nkwupụta mgbasa ozi na echiche ha gosipụtara ihe na-atọ ụtọ. Naanị 3% ga-akọwa azịza na mgbasa ozi dịka nke ziri ezi, na naanị 21% ga-akọwa mgbasa ozi dị ka ihe ziri ezi. Anyị chọpụtara kpọmkwem akụkụ nke mgbasa ozi ha na-ekwenyeghi - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile rụtụrụ aka na Photoshop dị ka mmewere nke aghụghọ aghụghọ. Lelee infographic n'okpuru si Lab42 maka nghọta na nghọta mgbasa ozi, nghọta nhịahụ, ma ọ bụrụ na mgbasa ozi ika na-arụ ọrụ.
Kwere ha ma ọ bụ na ikwenyeghi, ma a na-aza ajụjụ mgbasa ozi na-enyo enyo ma ọ bụ na ọ bụghị n'ikpeazụ site na ma ndị na-azụ ahịa zụtara ma ọ bụ na ọ zaghị. Enwere m ike ịlele mgbasa ozi na-ekwu na m nwere ike okpukpu abụọ m na-eduga ma na-azụta ihe n'echeghị na ha ga-eme abụọ. Ikekwe, n'ịgụ mgbasa ozi ahụ, ekwenyere m na atụmatụ ahụ dị mma ma baa uru ịnwale. Na nkenke, echiche m banyere mgbasa ozi nwere ike ịbụ ihe na-adịghị mma, mana m ka nwere ike ịzụta.
N'ezie, anaghị m akwado ịgha ụgha iji ree mgbasa ozi gị. Agbanyeghị, na-atụ aka na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu, onyinye, ihe nrita sitere n'aka onye ahịa nwere ike zuo iji dọta uche mmadụ. Ọ bụ atụmanya ị setịpụrụ onye ahịa gị bụ ihe dị mkpa!
Tags: echiche adechiche mgbasa oziika mgbasa oziinfographicụlọ nyocha 42Ogbogu Okonkwonghọta
iPad: Ndị na - agụ Akwụkwọ Martech Nweta ọnwa 3 na - akwụghị ụgwọ .bizMarketing Magazine
Jenụwarị 6, 2013 na 3:51 PM
M hụrụ n'anya na 'ihe mgbasa ozi kwesịrị ime' kụziere m, mee ka m mara maka ngwaahịa ma metụta m…. onweghi ebe o kwuru si ere m!